गोकुल बास्कोटालाई चोख्या,एर फेरि मन्त्री बनाउने तयारी,,,ता’ली या गा’ली? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
गोकुल बास्कोटालाई चोख्या,एर फेरि मन्त्री बनाउने तयारी,,,ता’ली या गा’ली?
काठमाडौं। ७० करोड कमिशन मा`गेको टेप प्रक`रणमा मुछिएका पूर्व सञ्चा`रमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । उनलाई सेक्युरिटी प्रि`न्टिङ प्रेस खरि`दको घु`सको मोलमोलाईको टेप प्रक`रणमा चो`ख्याएर मन्त्री बनाउनकै लागि प्र`धानमन्त्री केपी शर्मा
ओलीले मन्त्रिमण्डल पुर्नग`ठनलाई केही समय पछि धके`लेको बुझिएको छ । बास्कोटा टेपप्रक`रणमा चोख्खिएलगत्तै पु`नः मन्त्री बन्ने वि`श्वस्त स्रो`तले जानकारी दिएको छ । यसैका लागि यो`जनाव`द्ध तरि`काले प्र`क्रिया बढेको छ ।
बास्कोटाको टेपप्र`करणमा अख्ति`यार दुरु`पयोग अनुस`न्धान आ`योगले वि`जयप्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र टेपको डिभा`इस लिएर उप`स्थित हुन पत्र लेखेको छ । तर, मिश्रले एक साताभित्र आउन नसक्ने जान`कारी गराइसकेका छन् । को रो ना भा इरसको सं क्रमणका कारण चाटर्ड फ्ला`इट मात्र भएकाले आफू एक हप्ताभित्र आउन नसक्ने बताए ।
‘टेपको अडियो मात्र होइन मसँग भिडियो पनि छ अख्तियारलाई बुझाउँछु,’ उनले ऋषि धमलासँगको अन्तवा`र्तामा भने, ‘रेकर्ड गरेको छोरीको फोन जापान भएकाले त्यो लिन आएको हुँ ।’ जापानमा रहेका मिश्र सात दिनभित्र अनुप`स्थित भएमा बास्कोटाको विषय अगाडि नबढ्ने र बास्कोटा चो`ख्खिने अव`स्था बन्न सक्छ ।
मिश्रले आफू जापानमा रहेकाले आउन समय लाग्ने भनिसकेका छन् । उनले आफूसँग टेपको सामाग्री समेत रहेको दाबी गरेका छन् । अडियो मात्र नभई भिडियो टेप रेकर्ड पनि रहेको मिश्रको दा`बी छ । तर, उनले भिडियो सार्व`जनिक गरेका छैनन् । उक्त भिडियो नेपाल आउने वित्तिकै अख्तिा`रलाई बुझाउने समेत बताए । उनले भने, ‘भिडियोमा प्र`ष्ट छ कुनै क्यारिकेचर छैन ।’
यसैगरी, मिश्रले आफू अख्ति`यारको सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् । आफू जापान न’भागेको उनको दा,बी छ । ‘अनुस`न्धान अधि`कृत प्र`वीण पोखरेल सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो,’ मिश्रले भने, ‘मैंले अख्ति`यारमा दुईवटा निवे`दन हालेको छु ।’ रिपोर्टसनेपालबाट ।
Previous यो वर्ष विद्यालय र क्याम्पस नखुल्ने…हेर्नुहोस ।
Next राष्ट्रियसभाको नाम ‘हरूवा राहत सभा’ राख्न खगेन्द्र संग्रौलाको सुझाव,हेर्नुहोस!